Wɔkyerɛ Farao Dae Ase | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Yehowa Werɛ Amfi Yosef Da
Yosef da afiase no, Egypt hene Farao sosoo dae, nanso obiara antumi ankyerɛ ase. Farao akoa baako ka kyerɛɛ no sɛ, Yosef betumi akyerɛ dae no ase. Ntɛm ara na Farao ma wɔkɔfaa Yosef bae.
Farao bisaa Yosef sɛ: ‘Wubetumi akyerɛ me dae no ase?’ Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ: ‘Aduan bebree bɛba Egypt mfe nson. Ɛno akyi no, ɔkɔm bɛba mfe nson. Enti yi obi a onim nyansa na ɔmmoaboa aduan ano mfa nsie, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkɔm renkum wo nkurɔfo.’ Ɛnna Farao nso kaa sɛ: ‘Ɛnde mayi wo! Egypt asase yi so deɛ, sɛ minni hɔ a, wo na wowɔ hɔ!’ Ɛyɛɛ dɛn na Yosef tumi kyerɛɛ Farao dae no ase? Yehowa na ɔboaa Yosef.
Mfe nson a edi hɔ no, Yosef boaboaa aduan ano siei. Afei ɔkɔm baa wiase nyinaa sɛnea na Yosef aka ato hɔ no. Enti nkurɔfo fii nkurow pii so bɛtɔɔ aduan fii Yosef nkyɛn. Yosef papa Yakob tee sɛ aduan wɔ Egypt. Enti ɔsomaa ne mma du sɛ wɔnkɔtɔ bi mmra.
Yakob mma no kɔɔ Yosef nkyɛn. Bere a woduu hɔ ara pɛ na Yosef huu wɔn. Nanso ne nuanom anhu sɛ ɛyɛ Yosef. Yosef nuanom kotow no. Ɛmaa dae a ɔsoo ne mmofraase no baa mu pɛpɛɛpɛ. Ná Yosef pɛ sɛ ohu sɛ ɔtan da so ara wɔ ne nuanom mu anaa. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Moyɛ akwansrafo. Moaba sɛ morebɛhwɛ yɛn asase yi, na ama moahu baabi a mubetumi afa abɛyɛ yɛn bɔne.’ Nanso ne nuanom kaa sɛ: ‘Dabi! Yɛyɛ anuanom 12, na yefi Kanaan asase so. Yɛn nua baako awu, na kumaa no wɔ yɛn papa nkyɛn wɔ fie.’ Ɛnna Yosef kaa sɛ: ‘Ɛnde monkɔfa mo nua kumaa no mmra, ansa na magye nea moaka no adi.’ Enti wɔsan kɔɔ wɔn papa nkyɛn.
Bere a Yakob abusua no aduan sae no, ɔsan somaa ne mma no kɔɔ Egypt bio. Bere a wɔrekɔ no, wɔde wɔn nua kumaa Benyamin kɔe. Yosef yɛɛ sɛ ɔbɛsɔ ne nuanom ahwɛ. Enti ɔde ne kuruwa (cup) hyɛɛ Benyamin bag mu na ɔkaa sɛ, ne nuanom awia ne kuruwa no. Bere a Yosef nuanom huu kuruwa no wɔ Benyamin bag mu no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa paa. Enti wɔpaa Yosef kyɛw sɛ nea ɔpɛ biara ɔmfa nyɛ wɔn, na wɔn nua Benyamin deɛ, wɔsrɛ sɛ onnyaa no.
Wei maa Yosef huu sɛ ne nuanom asesa. Afei deɛ, na Yosef yɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yiye. Enti osui, na ɔkaa sɛ: ‘Mene mo nua Yosef. Me papa da so te ase anaa?’ Ɛyɛɛ ne nuanom nwonwa paa. Ɛnna Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Mommma nea moyɛɛ me no nnhaw mo. Onyankopɔn na ɔde me baa ha sɛ mimmegye mo nkwa. Monyɛ ntɛm nkɔfa me papa mmra ha.’
Bere a wokoduu fie no, wɔkaa anigyesɛm no kyerɛɛ wɔn papa, na wɔkaa sɛ Yosef se wɔmfa no mmra Egypt. Mfe bebree akyi no, Yosef san huu ne papa bio.
“Sɛ moamfa nkurɔfo mfomso amfiri wɔn a, mo Agya nso remfa mo mfomso mfiri mo.”—Mateo 6:15
Nsɛmmisa: Ɔkwan bɛn na Yehowa faa so boaa Yosef? Dɛn na Yosef yɛ de kyerɛɛ sɛ, ɔde ne nuanom bɔne akyɛ wɔn?
Genesis 40:1–45:28; 46:1-7, 26-34; Dwom 105:17-19; Asomafo Nnwuma 7:9-15